अन्ततः जेठाजुले स्विकारे बुहारी र छोरी, जेठी श्रीमती पनि सगै बस्न तयार (भिडियो हेर्नुस) – List Khabar
Home / समाचार / अन्ततः जेठाजुले स्विकारे बुहारी र छोरी, जेठी श्रीमती पनि सगै बस्न तयार (भिडियो हेर्नुस)
admin December 1, 2021 समाचार Leaveacomment 172 Views
संखुवासभा जिल्लाको सिलचुङ गाउपालिका ३ घर भएका नवराज राई ३ वर्ष देखि वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा बिदेश मै रहेका छन । तर उनकी श्रीमतिले भने यता बच्चा जन्माईन । श्रीमान बिदेशमै रहेको बेला बच्चा जन्मिने भए पछि उनी साउन महिना तिरै संखुवासभा छो डेर काठमाडौ बस्दै आएकी छिन । अहिले भने बच्चा जन्मीइ सकेएको छ । आफ्नै जेठाजुसगँ आफुले बिबाह गरेको र यो बच्चा पनि उसैको भएको नवराजकि श्रीमतिले बताएकी छिन ।
अहिले गाउँमा जेठाजु बिरेन्द्र राईले नै उनलाई लिएर हिडेको हो भन्ने हल्ला चलेको बिरेन्द्रकी श्रीमतिले बताएकी छिन । अहिले उनिहरु सबै काठमाडौमा भेटिएका छन । भेटमा बिरेन्द्रले भने बुहारीले जन्माएको बच्चा आफ्नो नभएको र आफुलाई आ रोप लगाए जस्तो आफुले बुहारीलाई लिएर नहिडेको बताउदै आएका थिए । तर बुहारीले भने आफुहरुले बिबाह गरेको बताएकी छिन। साथै अहिले जन्मिएको बच्चा पनि बिरेन्द्र कै भएको उनले बताएकी छिन । तर बिरेन्द्र भने अस्विकार गर्दै आएका छ्न । के हो त वास्तविक कुरो ?
बिदेशमा रहेका नवराजको काका को छोरा हुन बिरेन्द्र । नवराजकि श्रीमती र बिरेन्द्र जेठाजु बुहारी भएता पनि बेलुका ७/८ बजे तिर मोबाइलको चार्जर लिन बिरेन्द्रकोमा जादाँ संखुवासभाकै घरमा शारीरिक सम्बन्ध भएको बुहारिले बताएकि छिन । तर बिरेन्द्र भने आफू बच्चा नभएको र शारीरिक सम्पर्क पनि नभएको अडान राख्दै आफू डि एन ए परिक्षण गर्न पनि तयार भएको बताएका थिए। उता बुहारीले पनि बिरेन्द्र कै बच्चा भएको भन्दै आफू पनि जुनसुकै परिक्षण गर्न तयार भएको बताईन ।
Next यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ ? सावधानी अपनाउनु भन्दै आयो यस्तो सूचना